mairie-antananarivo – Taom-baovao Malagasy
administrateur 16 martsa 2018 Commentaires fermés
Misokatra androany 15 Martsa 2018 etsy amin’ny Parvis Analakely ny fampirantiana hanamarihana ny « Taombaovao Malagasy « sady » Fanaren-kasina ny maha Malagasy ». Haharitra 03 andro io fampirantiana io, izay eo ambany fiahian’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra. Nisolotena ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana teo an-toerana ny lefitra faharoa, Atoa Julien Andriamorasata izay nanamafy fa manohana tanteraka izao hetsika izao ny tanànan’Antananarivo Renivohitra.
Ekena, hoy ny lefitry ny ben’nytanàna fa fitsipika lehibe napetraky ny razantsika izao lanonana izao ary manaja sy mankasitraka izany ny CUA. Manome lanja ny kolon-tsaina, ny Fahendrena ary ny vakoka Malagasy ka vonona hatrany ny CUA hanohana amin’ny heriny manontolo. Nomarihan’Atoa Julien Andriamorasata fa tokony hisy ny fiarovana ireo asa tanana vita Malagasy avy amin’ny fitondram-panjakana, toy ny fahita any ivelany mba tsy ho lasan’ny vahiny hatrany ny vokatra mampiavaka an’I Madagasikara, mila ampiana ireo mpanao asa Tanana mba hahamatianina azy ireo.
Ny Alahady 18 Martsa ho avy izao, hoy ny filohan’ny Taombaovao Malagasy, Rakoto Davida, no tena fankalazana amin’ny fomba ofisialy ny « Taombaovao Malagasy » ary eo anoloan’ny Kianjaben’I Mahamasina no hanatanterahana izany, arahana kabary, tso-drano, ny afo tsimaty, ny vary sy ny ronono tondrahan-tantely ary ny afon-dasy.
AO ANATY » Fanabeazam-boho
Fampandrosoana ifotony: Any New-York ny Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana
KAOMININA ANTANANARIVO RENIVOHITRA (CUA)
Fanadiovana Faobe: Senat ka hatreny amin’ny COLAS ary Mahamasina GERB’OR
Fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny tetik’asa PRODUIR
Fanambarana mikasika ny EPP Soarano